Bittorrent Sync: "တိမ်တိုက်" အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာ | Linux မှ
Bittorrent Sync: "cloud" အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာ
သင်၏ဖိုင်များကိုသင်၏ကိရိယာများအားလုံးတွင်လွယ်ကူစွာနှင့်အလိုအလျောက်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်သင့်အား Cloud မလိုအပ်ပါ။ ငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် im-pre-sio-nan-te အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ Bittorrent Sync ဖြစ်သည်။ ဖိုင်များကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာအလိုအလျောက်ထပ်တူပြုနိုင်ရန်တူညီသော p2p နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါကအသို့နည်း။ Hehe ... မင်းကြိုက်တာလား ငါဆက်ဖတ်ခဲ့တယ် ...
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူမိုcloud်းတိမ်၌ဒေတာအသုံးပြုမှုတိုးလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိရောက်သောထိန်းချုပ်မှုမပါဘဲဖြန့်ဝေသောဒေတာ။ သို့သော်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများကဤနေရာထိုင်ခင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်၎င်းင်း၏လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများကို၎င်းအားအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများအမြဲဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Dropbox, Google Drive, SkyDrive သို့မဟုတ် iCloud ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများသည်မျှဝေထားသောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရာတွင်ယခုအချိန်တွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအမှုများသည်ဤအချက်အလက်များ၏သမာဓိရှိမှုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ချိုးဖောက်နေသောဥပဒေအသစ်အောက်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေအာမမခံသောကုမ္ပဏီအချို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်အာမခံထားသည့်အခြားနည်းလမ်းများရှာဖွေခြင်းသည်နည်းပညာကိုကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှု၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်မတိုးတက်စေလိုပါက ဦး စားပေးရပါမည်။ ယခုအချိန်အထိရှုပ်ထွေးမှုနှင့်လုံလောက်သောလူကြိုက်များမှုနည်းပါးခြင်းတို့သည်ဤရူပဗေဒနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာသော open source အခြားရွေးချယ်စရာများသည်စီးပွားဖြစ်ရွေးချယ်စရာများကိုလိုက်မီရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟုဆိုလိုသည်။
1 BitTorrent ထပ်တူပြုခြင်း
BitTorrent Sync သည် P2P protocol ကို အသုံးပြု၍ ဖိုင်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သည်။ Synchronize လုပ်ရန် Device နှစ်ခုကို configure လုပ်သောအခါ၎င်းတို့သည် UDP, NAT နှင့် UPnP ကို ​​အသုံးပြု၍ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကြသည်။ သို့မှသာဖိုင်များသည် Cloud တွင်သိမ်းဆည်းရမည့် third party အပေါ်မူတည်သည်။ အကယ်၍ devices နှစ်ခုလုံးသည် local network တစ်ခုတည်းတွင်သာရှိလျှင် BitTorrent Sync သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောထပ်တူပြုခြင်းအတွက်ထိုကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
BitTorrent Sync သည်ရိုးရိုးရူပဗေဒတစ်ခုမှစတင်သည် - ကြားခံများသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်တိမ်တိုက်များမရှိဘဲဖိုင်များကိုမျှဝေခြင်းနှင့်စည်းညှိခြင်း။ Dropbox နှင့်မတူဘဲ၊ ဤဖိုင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်နိုင်သောသိုလှောင်မှုကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။
အခုအချိန်မှာတော့သူကအသုံးများဆုံး operating system တွေဖြစ်တဲ့ Windows, OSX နဲ့ Linux မှာ NAT server အတွက်အထူးဗားရှင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီတွေအတွက်အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။
အသုံးပြုမှုအဆင့်တွင် BitTorrent Sync သည်ကျွန်ုပ်တို့သိသော application များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတော်လေးဆင်တူသည်။ လုံခြုံရေးအလွှာများသည်ယခင်သိပ္ပံတွင်မရှိခဲ့သည့်ကျော်ကြားမှုကိုရရှိသည်။ လမ်းညွှန်တစ်ခုဝေမျှခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိသည်။ ဖတ်ရှုမှသာ (သို့) ၂၄ နာရီကြာသောယာယီအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်အပြည့်အ ၀ ရယူနိုင်ရန်။ ဤရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီသည်လက်ခံသောကွန်ပျူတာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရေးရမည့် "secret" ဟုခေါ်သောကွဲပြားသောသော့ကိုထုတ်ပေးသည်။
ဖိုင်များကိုအရွယ်အစားနှင့်အမြန်နှုန်းအကန့်အသတ်မရှိမျှဝေနိုင်သည်။ P2P protocol ကိုအားကိုးခြင်းအားဖြင့်တစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် bandwidth ဖြစ်သည်။ ဤဖိုင်များသည်ကျပန်းထုတ်လုပ်ထားသောသီးသန့်စာဝှက်ကုဒ်ပါသောကွန်ယက်ပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေသည်။ ၎င်းကိုသာကျွန်ုပ်တို့မျှဝေနိုင်သည်။
Windows နှင့် Mac အတွက် desktop program များရှိပြီး Linux တွင် web interface တစ်ခုသုံးရမည်။ ကျနော်တို့သက်ဆိုင်ရာ download လုပ်ပါ:
yaourt -S ခါးသီး - ထပ်တူပြုခြင်း
Bittorrent Sync ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့် http: // localhost: 8888 / gui သို့သွားပါ။
ထို့နောက်သင်က၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော "secret" ကိုထပ်တူပြုရန်နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုကိုရွေးရမည်။ လျှို့ဝှက်ချက်သည်ကျပန်းဖြစ်ပြီးထူးခြားသည်၊ ၎င်းသည်ကိရိယာများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်သောကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်သောသော့ဖြစ်သည်။
ငါရရှိနိုင်သောအသုံးပြုမှုအကျဉ်းချုပ်သည်၎င်းကိုအလွန်အပြုသဘောဆောင်သည်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Dropbox ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေါင်းစည်းထားခြင်းကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိသေးသော်လည်းဖိုင်များကိုဝေမျှခြင်းနှင့်စည်းညှိခြင်းတွင်ရလဒ်ကောင်းများသည်။ မကြာမီကြေညာတော့မည့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်မှုသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်အားလွတ်လပ်မှုနှင့်ခိုင်မာသောလုံခြုံရေးတို့၏အားသာချက်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအဆင့်သို့ရောက်စေနိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက: Bittorrent ထပ်တူပြုခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Bittorrent Sync: "cloud" အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာ
Lester Somango ဟုသူကပြောသည်
မေးခွန်းတစ်ခုကကျွန်ုပ်၏ android မှဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်၏ pc သို့သာ upload လုပ်လိုပါက FTP ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါမည်လား။
ငါပြောတာကကိစ္စနှစ်ခုလုံးအတွက် "server" ကိုဖွင့်ဖို့လိုတယ်။ BittorrentSync ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်စကားဝှက်ကိုဆာဗာမှာထားရမယ်။
Lester Somango အားစာပြန်ပါ
အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းစွာငါ၎င်းကိုစတင်လိုက်သည်။ စကားမစပ်ကျွန်ုပ်၏ဂရပ်ဖစ်နည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ သင်၏ဖိုင်များကိုအရန်သင့်သိမ်းဆည်းပါ။ + xD ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုပါသည့်ပြင်ပ hard drive ။
Michael Mayol ဟုသူကပြောသည်
ပါပလော G + ကိုဆက်သွယ်တဲ့ ubunlog comment system ကိုကြည့်ပါ။ Disqus နှင့် FB ကိုသုံးနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ပေးမည့်အရာသည်အကြောင်းအရာမဟုတ်ကြောင်းသိပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် BKP ပုံရိပ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်သန့်ရှင်းသော Debian တပ်ဆင်ခြင်းကိုလုပ်ပြီး remastersys ကိုရှာဖွေသည်။ Remastersys သေတော့မည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ တရားဝင် remastersys ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပိုမိုသိရှိရန် (အရင်းအမြစ်) :http://tinyurl.com/7zqws2f) ။ ဒါဟာအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းကြောင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံး ၀ င်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားနည်းလမ်းများရှာရန်လိုလိမ့်မည်။
Emiliano Mateo ဟုသူကပြောသည်
OwnCloud နှင့်တူသောနောက်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု http://owncloud.org/
Emiliano Mateu အားအကြောင်းပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်အသုံးပြုသောအရာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား၊ ၀ က်ဘ်အားလုံးဖြစ်သောကြောင့်သင်ဆာဗာတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းထက်ပိုမလိုအပ်ပါ။
SparkleShare, ownCloud, Seafile, Duplicati နှင့်အတူအခမဲ့မိသားစုနှင့်အတူမိုthat်းတိမ်၌အခြား http://goo.gl/ju8wN
Rh @ အဆိပ် ဟုသူကပြောသည်
ခဏလောက်ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က zorin os နဲ့အတူ linux ကိုကျွန်တော်အသစ်ရောက်နေပြီ။
ဖိုင်ကို / home / computer / downloads ထဲကို download ချလိုက်ပြီးခရိုမီယမ်မှာထည့်လိုက်တယ် http://mi_ip:8888/gui ??
Rh @ venom အားပြန်ပြောပါ
သင် app ကို run ရန်လိုအပ်သည်၊ အကယ်၍ သင်စာမျက်နှာကို download လုပ်ပါက၎င်းကို unzip လုပ်ရန်လိုသည်ဆိုပါက console မှကူးယူထားသောဖိုင်တွဲသို့သွားပါ။ ပြီးလျှင် tar -xvzf btsync.tar.gz ကိုနှိပ်ပါ (သို့မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်မှား) ကျွန်ုပ်နှင့်သွားလျှင် ./btsync ကိုသွားပါ။ process တစ်ခုကိုဘာပေးသလဲကြည့်ရအောင် http://localhost:8888/gui
အိုကေဒါအလုပ်လုပ်နေတယ်။ အဲဒါမရှုပ်ဘူး။ အစီအစဉ်ကောင်း
သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ it ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ခွင့်ပြုချက်များနှင့် ၂၄ နာရီကိုကျွန်ုပ်တကယ်ကြိုက်ခဲ့သည် I ငါခဏတာတစ်ခုခုဝေမျှရန်ခဲယဉ်းသည်။
အလွန်ကောင်းတဲ့ tool ကို! ငါထိုကဲ့သို့သောကောင်းသောဆောင်းပါးများကိုဝေမျှနေခဲ့တယ်!
အိုင်ဗင်အိုမာ Cruz ruiz ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းကောင်းတယ်၊ ကျွန်တော်ရှာဖွေနေတဲ့အရာ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖိုင်များကို FTP ဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းပြုလုပ်သော်လည်းဒီဟာကအခက်အခဲများစွာဖြစ်စေပါတယ်
Ivan Omar Cruz ruiz ကိုပြန်သွားပါ
Tahuri လူသတ်သမား ဟုသူကပြောသည်
သင်ချန်ထားသော link သည်အလုပ်မလုပ်ပါ ငါ pc တစ်ခုအတွက်လား၊ android devices တွေအတွက်လည်းသုံးလို့ရမလားသိချင်တယ်။ မင်္ဂလာပါ
Tahuri Killer အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
ဟယ်လို! link ကပြီးပြည့်စုံတယ်။
ဒီထက်နည်းသို့မဟုတ်ပိုနည်းလိမ့်မည်။ "login" သည်အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ သို့သော်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်မည်သို့အလိုအလျောက်လုပ်သနည်း။ FTP တွင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သင့်သည် (သို့) script သို့မဟုတ် cron ဖြင့်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်သင့်သည်။ rsync နှင့်အခြား file syncing alternates များနှင့်လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်။
နယ်လ်ဆင် G. အ Lombardo ဟုသူကပြောသည်
ငါချစ်တယ် ဒီနည်းပညာကိုစက်တွေအကြားစည်းညှိဖို့နေရာဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြာမြင့်စွာကတည်းကတွေးမိသည်။ 🙂
သို့သော်လည်း Device များအကြားလုံခြုံစွာမျှဝေရန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် SSH ရှိသည်၊ ၎င်းသည် Dolphin နှင့်ဆင်တူသည်ကိုသုံးရန်မလိုပေ။ Bittorrent Sync ဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များမရှိဘဲဆက်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ Box, Dropbox, Wuala စသဖြင့်မှန်ကန်သောအခြားရွေးချယ်စရာများအတွက်သင်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည့်ဆာဗာများပေါ်တွင်နေရာတစ်ခုလိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုအာမခံနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုမှာအခမဲ့ပရိုတိုကောလ်များအသုံးပြုသောဆာဗာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုအဘယ်အရာလုပ်ဆောင်သည်ကိုအတိအကျသိရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများသို့မပို့မီကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ဒေတာကိုဒေသတွင်းစာဝှက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ခိုင်မာသောစာဝှက်စနစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲအခြားသူများကဖတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းအာမခံခဲ့လျှင်ပင်ဆာဗာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောစာဝှက်သည့် အချိန်မှစ၍ X နှစ်အတွက်မိတ္တူတစ်စောင်ကိုသိမ်းဆည်းရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်ရုတ်တရက်ထိန်းချုပ်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ချိုးဖျက်နိုင်။
ငါမသိရပေမယ့်ငါမိုto်းတိမ်ကိုမှအခြားရွေးချယ်စရာရှိမရှိမရှိမှအဖြေကိုယနေ့ကဘယ်သူမျှမက, ကံမကောင်း, ဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သည် 24 နာရီတစ်နေ့လျှင်ဖိုင်များရရှိနိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်, ငါတို့အဘယ်သူမျှမရှေးခယျြမှုရှိသည်ပေမယ့်ဆာဗာမှတဆင့်သွား သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာကို Owncloud နှင့်တပ်ဆင်လိုပါကသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုရှိပါကသင်တတိယပါတီများအပေါ်မှီခိုရန်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ ၊: -s ။
အမှန်ပါပဲ။ ၎င်းသည် "ပြည့်စုံသော" အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ပြောသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် server ကို owncloud ဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Cloud ကိုသာရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ငါခေါင်းစဉ်နှင့်အတူမိုalternative်းတိမ်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူသဘောမတူ, bittorrent ထပ်တူပြုခြင်းအခမဲ့ဆော့ဝဲမဟုတ်သောကြောင့်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, developer များကသူတို့ကုဒ်ထုတ်လွှတ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလေ့လာနေကြသည်, ဒါပေမယ့်ယခုများအတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲမဟုတ်ပါဘူး။ မင်္ဂလာပါ။
ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရင်ပေါင်ပေါ်၌ (သို့) desktop ကွန်ပျူတာပေါ် မူတည်၍ တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ရန်ပြုလုပ်လိမ့်မည်
Australis ကဘာတွေလုပ်ပေးလဲ၊ Firefox interface အသစ်